INgqungquthela yaseMelika yaseMelika: I-SAT Score Ukuqhathaniswa kokungeniswa
I-SAT Score Ukuthelekiswa kokungeniswa kwii-12 ze-Mid-American Conference Conference
Ukuba uyazibuza ukuba unayo izikolo ze-SAT uzakufuna ukungena kwelinye leyunivesithi yaseMidamerican , kukho ukuqhathaniswa ngokulandelana kwamanqaku kuma-50% aphakathi kwabafundi ababhalisile. Ukuba amanqaku akho awela ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujoliswe ekujoliswe kuyo kwenye yezi ziko.
Qaphela, ke, ukuba izikolo ze-SAT ziyingxenye enye yesicelo. Amagosa amaninzi e-admissions kwiiyunivesithi zaseMidamerican kwiinkomfa ziya kukhangela irekodi ephakamileyo yesikolo , isicatshulwa esenziwe kakuhle kunye nemisebenzi eyenziweyo yecandelo lexesha .
I-Mid-American Inkcazo yeNgqungquthela yokuThathaniswa (phakathi kwama-50%)
KwiBhola 500 590 490 580 - -
Ephakathi eMichigan 450 570 440 570 - -
EMpuma Michigan 460 560 450 580 - -
State Kent 470 580 480 580 - -
University of Ohio 490 600 500 600 - -
ENtshona Michigan 455 560 445 555 - -
Indlela yokutshintsha iindlela zakho kunye nokuphucula amaBakala akho
10 ama-Villains aphezulu kunazo zonke
Buona Pasqua! I-Easter eItali